किन बाेल्दैनन् गगन पुरी ? - पूर्व न्यूज-Digital Newspaper
किन बाेल्दैनन् गगन पुरी ?
झापा, पुस २८: विशेष अदालतको ‘निर्देशनात्मक आदेश’पछि रिहाइ भएका नेकपा नेता रेवतराज पुरी(गगन)ले अहिलेसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनलाई पुस १७ गते उनलाई तारेखमा रिहा गरेको छ । उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागकाे ३९ दिन हिरासतमा बसेका थिए ।
सरकारी जग्गा कीर्ते गरी हत्याएको अभियोगमा उनलाई विभागले पक्राउ गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले उनलाई थुनामा राख्ने अनुमति नदिएपछि विभागले उनलाई रिहा गरेको हो । रिहाइ लगत्तै उनलेे धारणा राख्ने बताएका थिए । पुर्व न्युजसँग उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर धारणा राख्ने बताएका थिए । तर उनलेे अहिलेसम्म पक्राउ बारेमा धारणा दिएका छैनन् ।
दमक–८ को सरकारी जग्गा कीर्ते गरी आफ्नो नाममा हत्याएको आरोपमा पुरी विरूद्धको मुद्दा झापा जिल्ला अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छ । उनी जिल्ला अदनलबाट धराैटीमा रिहा भएका थिए ।
सरकारी वकिलले मुद्दा अभियोजन गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयोजनार्थ अनुसन्धान गर्न भनेपछि विभागले पुरीमाथि अनुसन्धान थालेको थियो । पुरीले २४ बिगाहा सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर बिक्री गरेको भेटिएको छ ।
पुरी दमक नगरपालिका–६ का हुन् । उनी नेकपा एक नम्बर प्रदेश कमिटीका सदस्य हुन् । उनी गत स्थानीय निर्वाचनमा दमक नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार थिए। उनी तत्कालीन जनमाेर्चाबाट इलाम २ मा उम्मेदवार थिए ।
२८ पुष २०७७, मंगलवार १७:०३
On: २८ पुष २०७७, मंगलवार १७:०३
Previous Post: कक्षा ११ नयाँ पाठ्यक्रममैै, सर्वोच्चद्वारा रिट खारेज
Next Post: मोटरसाइकल चोरी गर्ने गिरोहको सञ्जालका सदस्यहरूलाई पक्राउ